Marii Paartilee siyaasaa: “Boordii filannoorraa shakkii qabna” – Pirofeesar Mararaa Guddinaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMarii Paartilee siyaasaa: “Boordii filannoorraa shakkii qabna” – Pirofeesar Mararaa Guddinaa
Marii Paartilee siyaasaa: “Boordii filannoorraa shakkii qabna” – Pirofeesar Mararaa Guddinaa
Paartileen siyaasaa Itoophiyaa keessa socho’an Roobii yeroo sadaffaaf Finfinnee galma Komiishinii Diinagdee Afrikaatti wal arganii mari’ataniiru.
(bbcafaanoromoo)–Marii marroo sadaffaa, MM Abiy Ahmad irratti hirmaatan kanarratti qabxiilee gurguddoo afur irratti barreefamoota dhiyaatan ka’uumsa godhachuun irratti mari’atameera jedhu namni siyaasaa gameessi pirofeesar Bayyanaa Pheexiroos.
Seenaan heera mootummaa fi sirna heera mootummaa Itoophiyaa dhimmoota irratti mari’ataman keessaa tokko yoo ta’u, heera mootummaa amma hojiirra jiru keessaa wantoonni fooyya’uu qabu jedhaman ka’anii mariin irratti godhameera jedhan pirofeesar Bayyanaan.
Qabxiileen jijjiiramuu qaban kan irratti mari’atamu ta’ee heerri mootummaa kun fooyya’iinsa akka barbaadu harki caalmaan irratti waliigalameera jedhan.
Yoom fooyya’a kan jedhu ilaalchisees, harki caalmaan filannoon bilisaa fi haqa qabeessa ta’e erga taasifameen booda akkaatuma heerichi hayyamuun haa raawwatu kan jedhu irratti waliigalle jedhu.
Heerri mootummaa fooyya’uu akka hin dandeenye keewwatawwan hudhaa ta’an kan salphaatti manni maree bakka bu’ootaa fi manni maree federeeshinii fooyyessuu danda’an yoo jiraate haa ilaalamu kan jedhus mari’atamuu himan.
Qabxiin biraa irratti mari’atame ijaarsi paartilee siyaasaa Itoophiyaa maal fakkaata?, fuulduraaf hoo maal fakkaachuu qaba? kan jedhu ta’uu dubbatu.
Paartileen naannoo tokko keessaa socho’an kaayyoon isaanii tokko yoo tahe bakka tokkotti osoo walitti dhufanii ijaaramanii kan jedhu ka’uu himu.
Paartileen cunqursaa saba bakka bu’anirra gahaa turee ykn ammoo eenyummaan saba sanaa hin baramneef ka’umsa jedhuun kan hundaa’an malee yaadama siyaasaa bu’uura kan godhatan ta’uu dhabuun irratti mari’atameera jedhan pirofeesar Bayyanaan.
Sana keessaa bahuun yaadama siyaasaa bu’uura godhatanii ijaaramuu akka qaban irratti mari’atamuu himu.
Qabxii biraan ammoo Itoophiyaa keessatti sababawwan walitti bu’insaa maali kan jedhu ka’eera jedhan.
Irra caalmaan sababni walitti bu’iinsaa rakkoo bulchiinsa gaarii fi olaantummaan seeraa kabajamuu dhabuu irraa kan ka’e akka tahe ka’eera jedhu namni siyaasaa kun.
Dabalataan paartiin biyyattii bulchu fedhii isaa eegsifachuuf jecha dhiibbaan qaamolee adda addaa irraan gahus ka’uumsa walitti bu’iinsaa ta’uun mari’atameera jedhan.
Sadarkaa biyyaatti wal-diddaawwan jiran maali?, kanneen furamuu danda’anii fi hin dandeenye isaan kami? jedhamee osoo adda baafamee yaadni jedhu ka’uus himu.
Xumura irratti seenaa filannoo Itoophiyaa irratti mari’atamuu kan himan pirofeesar Bayyanaan, filannoowwan sirna mootii Hayilasillaasee irraa eegalee taasifamaa turan dimokiraatawaa akka hin turre ka’eera jedhu.
Filannoon as deemu yoom haa gaggeeffamu?, akkamiin haa gaggeeffamu? kan jedhu mari’atamuus dubbatu.
Biyyattii keessatti nageenyi osoo hin jiraatiin, walii galteen biyyaalessaa osoo hin uumamiin filannoo gaggeessuun ulfaatadha jechuun gareen kaase jira jedhu.
Qaamoleen adda addaa mootummaan amma jiru beekamtii seeraa hin qabu jechaa waan jiraniif, kun ammoo biyyattii keessatti rakkoo uumuu waan maluuf, koroonaas yaada keessa galchuun filannoo gaggeessuu dirqama jechuun kanneen kaasanis jiru jedhan.
Irra caalaan paartilees filannoon gaggeeffamu qaba yaada jedhu kaasan jedhan.
Pirofeesar Mararaan maal jedhu?
Marii kanarratti kan hirmaatan pirofeesar Mararaa Guddinaa, marichi yaadoliin gara garaa kan irratti mari’atamu malee guduunfaa kan qabu miti jedhu.
“Mootummaan kana godhaa, warri mormituun kana godhu waan jedhu hin qabu. Yaaduma dhiyeessuudha, yaada ta’us, yaada hin taanes dhiyeessuu dandeessa,” jedhan.
Marroo sadaffaaf yaadoliin bal’aan ka’anii mari’tamuu kan himan pirofeesar Mararaan, wanti guduunfamee irratti walii galame akka hin jirre dubbatu.
Bu’a-qabeessummaa marichaa kan gaafataman pirofeesar Mararaan, “mootummaan wanti dubbatamu galeefii, biyyaafis bu’aa qaba jedhee kutannoon yoo itti deeme dhumni isaa bayeessa ta’uu danda’a” jedhan.
Mootummaan kutannoo qabaachuu baannan garuu yeroo balleessuu malee bu’aa hin qabu jedhan.
Kutannoo mootummaan rakkoo biyya kanaa furuu fi marii kanas hojiitti hiikuun wal qabatee qaburraa shakkii akka qaban pirofeesar Mararaan BBC’tti himaniiru.
“Boordii filannoorraa shakkii qabna”
Filannoon waan sadiif barbaachisa kan jedhan pirofeesar Mararaan isaanis nagaa, bulchiinsa gaarii fi guddina biyyaati jedhu.
Filannoo dhugaa bu’aalee kana argamsiisu gochuuf ammoo waliigalteen biyyaalessaa ni barbaachisa, haala amma biyyi keessa jirtuun filannoo bu’aa akkasii fidu taasisuun hin danda’amu ejjennoo jedhu akka qaban dubbatu.
Mootummaa fi paartilee jidduu filannoo dhugaa gochuu irratti wal amantaan jiraa?, boordiin filannicha raawwachiisu qaama bilisa ta’edhaa? kan jedhuu fi gaaffileen biroo deebii barbaadan hedduun jiraachuus himu.
“Nuti boordii filannoorraa shakkii qabna jenna, mootummaan ammoo isaan bilisadha jedha, irratti walii hin galle” jedhan.
Dhimma heera mootummaa fooyyessuu ilaalchisees maaltu fooyya’uu qaba kan jedhu irratti waliigalteen ni barbaachisa jedhu pirofeesar Maraaraan.
Suni filannoo dura waan ta’u hin fakkaatu jedhan.
Ammatti biyyattiif kan barbaachisu akkamiin filannoo dhugaa fedhii saba biyya kanaa guutuu danda’u gochuun danda’ama, akkamitti boordii filannoo bilisa ta’e ijaaruun danda’ama kan jedhu irratti walii galuun ni barbaachisa jedhan.
Marii har’aa irratti dhimmi kun ka’ullee, mootummaan “filannoo kana asumaa fi achi qabeen bira darba” ejjennoo jedhu waan qabu fakkaata jedhu.
“Mootummaan ‘filannaa dhugaa’ gochuuf kakachaa jira, garuu kakataniituma nama ganu,” jedhan.
Mariin paartilee siyaasaa kun yeroo hogganoonni siyaasaa bebbeekamoon hidhaa jiranitti kan taasifamaa jiru ta’uun isaa, namoota garii biratti fudhatama akka hin arganne taasiseera.
Kanneen marsaalee hawaasaa gubbaa babarreessanis shakkii marii kanarraa qaban ibsachaa jiru.
#Saamicha- ABOn biyyichi balaa hamaa keessa galuu himee jira;